Ukufakwa panel plastic ezindongeni ngezandla zakhe wenza abanikazi namuhla ezindlini kanye nezindlu kaningi. Akumangazi, ngoba le nto kunezinzuzo eziningi. Uma imikhiqizo yakhiwa plastic, bese ingasetshenziswa endlini, ngisho emakhishini kanye zokugezela. Phakathi kwezinye izinto, basuke ngenkuthalo usebenzisa futhi yekwembesa lubondza zebhizinisi kanye namahhovisi. Ayikho ngaphandle kanye izakhiwo zezimboni.
Iphaneli ngesisekelo PVC anganezelelwa kunoma iyiphi indawo, lapho ukhuni-based, isitini, ukhonkolo noma ilahle amabhulokhi. PVC amapuleti zibukeka zizinhle nokuthi ophahleni. Tincenye polyvinyl chloride kungaba ibhekane imvelo kunalokho nolaka, kuhlanganise lokushisa kule uhla -60- + 500 0 C. Phakathi kwezinye izinto, uchaza izingxenye ezinkulu ibhekane ukuchayeka UV ukukhanya, futhi angathengwa ngokukhetha imikhiqizo ephuma anhlobonhlobo imibala.
Izici ukufakwa kwe-panel ezindongeni
Okuhlobisa odongeni umhlobiso panel zingenziwa kwi ikesi noma ngqo phezu komduli. Kulo mBhalo, ebusweni kumele kube flat ngokuphelele. Ukuze umsebenzi, banikezwe izici izakhiwo, kungase kudingeke uthenge izinto ezinhle ezengeziwe, phakathi awo: ekhoneni yangaphandle, qala isici, ingaphakathi ekhoneni yokuqedela isici, kanjalonjalo.
Njengomthetho, ezindongeni iphaneli ahlelwe thwi, kodwa ungakwazi ukufaka kubo ukuyaphezulu, bese ngokuphambeneyo. Kukhona enye inguqulo lokunamathelisa, yilokho okubizwa ngokuthi "herringbone", kodwa le ndlela idinga semali impahla kanye ephelezelwa nobunzima ngesikhathi sokufakwa.
Ukufaka panel Ukwakheka ingcina
Ukufakwa plastic odongeni panel ezandleni zabo zingaba ngokusebenzisa i ingcina, Nokho, njengoba kushiwo ngenhla, lapho kudingeka acabangele ukuthi ebusweni kumele kube flat. Lezo zici has odongeni ngokuvamile ukhonkolo. Ekuqaleni, base kuyodingeka ukuhlanza futhi ugeze. Lokhu kuyadingeka hhayi kuphela ukwenza udonga doti zakwamanye amazwe, kodwa futhi ngoba degreasing, ezizohlinzeka eliphezulu of adhesion.
Wall emva yokuhlanza kufanele kwesokunxele kuze kube okwamanje omiswe, kuphela emva ungaqala gluing imikhiqizo. Ngokuhamba umsebenzi Kunconywa yokwakheka "Titan", abakghona esikhundleni "izinzipho uketshezi".
Ukufakwa panel plastic ezindongeni ngezandla zakhe lokwakha ingcina zafaniswa odongeni sigcizelelwa iphrofayela ukuziqalela. Ukwakheka ozofakwa odongeni, ukwakha uhlobo igridi kungekho izikhala. I plate kumele ahlala e iphrofayli ukuziqalela, futhi ngemva ecindezelwe kahle plate. Khona-ke kubalulekile ukuba ulungise bese ubamba okwesikhashana kuze engatholwa glue. Ngemva ukulungiselela ungakwazi uqhubekele zone esilandelayo. Okulandelayo komkhiqizo ayovuleka ngaphansi ipuleti eshalofini kwelivi esandulele.
I protrusion futhi eshalofini kukhona izakhi ukucushwa, ezisetshenziswa for axube izihloko ndawonye. Uma kudingeka, kudlule emakhoneni, kungakhathaliseki ukuthi bakuphi - yangaphakathi noma yangaphandle, ukusebenzisa izakhi oshiwo ngenhla, ezithinta anemifantu nhlangothi zombili ukuze ukufakwa kwemikhiqizo. Okwamanje wena ngifike ekhoneni, kungase kudingeke ukuba ukuphuma umkhiqizo ukwenza kube babe Ubukhulu adingekayo. Kunconywa ukusebenzisa ummese.
Ukufakwa panel plastic ezindongeni ngezandla zabo esikhathini ndima kuhilela engela ukufakwa ekhoneni iphaneli yokuqala ishayisa iziqobosho inkatho ekhoneni. Ngenxa sokugcina yokuqedela imele plinth obandayo, kanye frieze ophahleni.
Izici ukufakwa lathing
Ngokuvamile namanje ababhemayo ngaphambi kokufakwa ku odongeni panel kuyinto Uhlaka esinqunyiwe, elikwaziyo ezingeni ebusweni semfene. Uma uhlela bazilungisele umshini egumbini ezomile, ogama izindonga ezenziwe ngokjuni, ingasetshenziswa njengoba indaba for battens ugodo. Lolu khetho ngeke isikhathi esiningi futhi ngempela ukonga. yokuqedela zokuhlobisa izindonga ngokuvamile kakhulu ekhiqizwa ilungiselelo mpo amapuleti ukuze abantwana izakhi kumele perpendicular battens imikhiqizo. Isinyathelo phakathi emapheshana ungakwazi ukukwenza kufanele kulingane 30-40 cm. Ububanzi nemishayo, kanye ukushuba yabo, azibalulekile, kodwa uma ibanga phakathi ngombala futhi odongeni kwakwanele, mahhala eziyize isikhala Kunconywa yokugcwalisa ukwahlukanisa noma impahla umsindo abaningi.
Ukufakwa imikhiqizo likhreyithi
Uma une ngenhloso yokukhuphula izindonga sokhuni, imigoqo ukwaziswa okufanayo kumele ukufakwa usebenzisa ngezikulufo. Kodwa, sicela uqaphele ukuthi udonga akuyona bushelelezi ngakho, okhombisa isidingo ukusebenzisa ezingeni. Lezi zingqimba kufanele ukukhwezwa thwi, njengoba kufanele luqiniswe a flange abanzi nemigoqo. Ukukhweza engenziwa ngokusebenzisa enye yezindlela eziningana. Eyokuqala ihilela ukuhlela ukulungisa ngokuyibethela flange, kuyilapho ukhetho lwesibili kuhilela ukusetshenziswa ngezikulufo encane lokubopha. Kukhona enye indlela, okuyinto kuhambisana ukusetshenziswa besokunxele steel. Ubuchwepheshe yokugcina yisona esikhulunywa abantu abaningi, njengoba ikuvumela ukuba ugcwalise umsebenzi ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi kulula ukuba kusebenze.
panel Plastic egumbini lokugezela, ukufakwa okuyinto kusikisela ukuba khona ikesi, ikhiqizwa uhla engeli ngendlela efanayo esiye kuchaziwe ngenhla, kodwa amanye iziqobosho asetshenziswa esikhundleni ingcina. It Kunconywa ukuqala kusuka ekhoneni, kancane kancane liyasondela ewindini noma emnyango. Uma kukhona isidingo ukunweba eside lempilo lokhuni ikesi izakhi kohlelo, kubalulekile ukuba aphathe ebusweni ekhuthaza ekhethekile ukuvikela impahla kusukela izinambuzane kanye isikhunta.
Ukulungiselela ngaphambi kokufaka ngohlaka lwensimbi
Ukufakwa plastic odongeni panel zingaba luhlaka steel. Lokhu kuyiqiniso ngoba izindonga brick nalezo at ngesisekelo ilahle amabhulokhi. Uhlaka kuyoba ngokohlelo lweSitatimende iphrofayela lashukumisa. Ngaphambi kokuqala umsebenzi nge kangakanani ilungise ebanzi kakhulu amathuluzi, kuhlanganise:
Ekuqaleni ukuba ukwahlukanisa ngokuchaza indawo protuberant kakhulu ezindongeni, okuyindawo Kuyaqapheleka ibanga esasihlukanisa umkhiqizo odongeni. Ibanga wawubona kukalwa thwi obondeni perpendicular.
Ukusetha ngohlaka lwensimbi
Ngaphambi kokuba uqale ukuhlomisa ezindongeni panel plastic, azungezwe udonga ukukhwezwa ukuqondisa iphrofayela UD hlobo. Ukulandela uhlelo efanayo nendawo efakwe CD-uhlobo iphrofayli. Ukubeka ukumiswa ngqo phezu ikhiqizwa esebenzisa ngezikulufo, efakwe kule dowels. Izimbobo ngemva Ukumaka ngendlela eyenziwe iyashaya. Conjugation nge iziqobosho steel futhi iziphanyeko nomunye wenziwa esebenzisa nezikulufi iDemo. Uma sikwazi ukuqedela umsebenzi ukufakwa Batten kwenye odongeni, usungaqala ukusebenza odongeni yesibili. Futhi ngakho kuze kube yilesi sikhathi, kuze kube yilapho efakwe ebhokisini wonke ikamelo.
Lapho sebeqedile panel plastic ekhishini noma iliphi igumbi nezinye izinjongo, kufanele kuphawulwe ukuthi ezindongeni kukhona enethiwekhi futhi ukushintsha, lapho amapuleti kukhona ukuba ukuphuma izimbobo ngaphambi kokuqala ukufakwa. Zonke msebenzi akufanele ziqale lapho amandla sisetshenziswa.
Nokubopha kokuqeda kwi steel purlin
I ipuleti lokuqala kufanele ngobunono nilimaza e uhlobo UD-lephrofayela kanye eshalofini ububanzi fixed ezindaweni eziningana ne-CD-iphrofayli. Okulandelayo nto zokuhlobisa ufakwa eshalofini ngaphambi bese ilungiswe nge ngezikulufo. Ukuze kudlule emakhoneni, kufanele usebenzise iziqondiso plastic, kuqinisa kuya ebhokisini. Uma ububanzi iphaneli yokugcina lalilikhulu, kubalulekile ukuba usike ngokunembile ngommese, bese uqale isici aliqede.
Ifaka i- panel plastic ophahleni
Bopha panel plastic odongeni futhi ophahleni ubuchwepheshe obufanayo. Uma asikho isidingo lokufeza zokuxhumana nophahla ukukhanyisa, ungafaka isicelo glue. ipuleti Oku kumele kahle bahlanza futhi camera nge primer. Uma uhlose ukusebenza izibuya eziphathekako kubalulekile ukufaka ukukhanyisa, ngaleso sikhathi kuqhubeke ubuso bayo ngeke ukukala mayelana 12 cm bese usetha UD-iphrofayli. Ngemva kude yayo unamathele CD-Iphrofayela, okuyinto asethwe esebenzisa ngezikulufo, ipuleti plastic lapho izimbobo ukuze kwenziwe kusengaphambili izibani. Ngaphambi sheathing panel plastic ophahleni, udinga eyolanda umngcele zokuhlobisa, okuzokwenza isethwe esigabeni sokugcina.
Matiola: ezikhula imbewu yalokho ephelele